2018 – Kooxda.com
Rasmi: Leroy Sane Oo Ku Guulaystay Da,yarka Ugu Fiican Horyaalka Premier League
Xiddiga Kooxda Man city ee Leroy Sane ayaa ku guulaystay xiddiga da,yarka ah ee ugu fiican horyaalka premier League xilli ciyaareedkan. Xiddigan oo soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah ayaa kooxdiisa Man city kula guulaystay horyaalka premier League xilli ciyaareedkan.…
April 23, 2018 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Xiddiga Kooxda Liverpool ee Mohamed salah ayaa si Rasmi ah ugu guulaystay abaalmarinta xiddiga ugu fiican xilli ciyaareedka isaga oo ku garaacay 5 xiddig oo kula tartamayay abaalmarintan. Salah ayaa abaalmarinta ka hor qaaday xiddigaha Kevin De Bruyne,Harry Kane,David De…
Xiddigaha Kooxda Bayern Munich ayaa ka hadlay kulanka ay la ciyaari doonaan Real Madrid iyaga oo dhawr xiddig sheegeen in ay Real Madrid la ciyaari doonto koox kalsooni buuxda waliba rumaysan in ay gaari karaan finalka champions League. Xiddigo dhawr…
April 22, 2018 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Xiddiga Khadka dhexe uga ciyaara kooxda Real Madrid ee Luka Modric ayaa si maldahan u sheegay in ay dhawdahay wakhtigii uu ka tagi lahaa kooxda Real Madrid xilli uu da, ahaa siin weynaanayo. Luka Modric ayaa ka hadlay waxa lagaaga…
April 22, 2018 · by	Abdi Weli Aadan · 1
Weeraryahanka kooxda chelsea ee Olivier Giroud ayaa shaaca ka qaaday wixii uu u sheegay xiddigaha ay isku kooxda yihiin qaybtii nasashada kana caawiyay kooxdiisa in ay gaarto guul 2/0 ah oo ka caawisay in ay gaaraan Finalka FA Cup-ka. Xiddiga…
Tababaraha Kooxda Arsenal ee Arsene Wenger ayaa si maldahan u sheegay cidii ka dambaysay go,aankii uu ku shaaciyay in uu ka tagi doono kooxda Arsenal dhamaadka xilli ciyaareedkan. Tababare Arsene Wenger ayaa sheegay in uu dhaawacay taageerayaasha Gunners sanadihii ugu…
Kooxaha Man United iyo chelsea ayaa si Rasmi ah u xaqiiqsaday booskooda Finalka FA Cup-ka Xilli ciyaareedkan iyaga oo calafkooda ku kala qaadi doona koobka. Kooxda chelsea ayaa guul raaxo leh ka gaartay kooxda Southampton iyaga oo uga badiyay 2/0…
Kooxda Chelsea Oo Guul Qaali Ah Ka Gaartay Southampton & Blues Oo Finalka FA Cup-ka Balansatay Kooxda Man United
Kooxda Chelsea ayaa balansatay kooxda Man United Finalka FA Cup-ka kadib markii ay guul dirqi ah ka gaareen kooxda Southampton kulan ka dhacay garoonka Wembley. Kulanka ayay labada kooxoodba ku bilowdeen si taxadar leh iyaga oo si fiican daafacooda u…
Daawo: Olivier Giroud Oo Isku Badalay Lionel Messi Gool Wareer Ahna Ka Dhaliyay Southampton
Weeraryahanka kooxda Chelsea ee Olivier Giroud ayaa gool cajiib ah u dhaliyay kooxdiisa kulanka ay kooxdiisu haatan la ciyaarayso Southampton. Olivier Giroud ayaa farsamo cajiib ah 3 xiddig iyo goolhayaha dhulka ku dhigay ka hor inta uuna kubada dhex dhigin…
Dib U Eegid: 4 Xog Oo Laga Diwaan Galiyay Kulankii Ay Arsenal Guusha Weyn Ka Gaartay West Ham
Kooxda Arsenal ayaa guul weyn ka gaartay kooxda West Ham kulan ka tirsanaa horyaalka premier League todobaadkii 35-aad ee horyaalka kulan ka dhacay Emirates. Goolal ay dhaliyeen xiddigaha Nacho Monreal, Alexandre Lacazette (2) iyo Aaron Ramsey ayaa Gunners ka caawiyay…
Shaxda Rasmiga Ah Ee Man City Vs Swansea City: Guardiola Oo Laba Is Badal Ku Sameeyay Shaxdiisa
Kooxda Man city ayaa goorkeeda Etihad ku soo dhawayn doonta kooxda Swansea City kulan ka tirsan horyaalka Premier League todobaadkisii 35-aad. City ayaa kulanka soo galaysa iyaga oo Ah kooxda difaacanaysa horyaalka premier League markii ay ku guulaysteen Axadii hore.…
Arsenal Oo Guul Weyn Ka Gaartay Kooxda West Ham & Alexandre Lacazette Oo Laba Jeer Shabaqa Soo Taabtay
Kooxda Arsenla ayaa Guul weyn ka gaartay kooxda West Ham kulan ka dhacay Emirates kana tirsanaa horyaalka premier League todobaadkiisii 35-aad. Garoonka Emirates ayaa ahaa mid si xad dhaaf ah loo soo buuxiyay iyada oo ay taageerayaashii soo xaadiri waayay…
Wax walba waxa ay tilmaamayeen kadib dhamaadkii finalkii Copa Del Rey-ga in uu yahay kulankii ugu dambeeyay ee uu Iniesta u ciyaari doono Barcelona tartanka iyada oo ay u badan tahay in uu u dhaqaaqi doono horyaalka Shiinaha. Waxa uu…
Real Madrid Oo Rikoor Cajiib Ah Oo Taariikhi Ah Ka Dhigtay Tartanka Champions League
Bar-Barihii 0/0 ahaa ee ay Real Madrid la gashay kooxda Man city 26 bishii April 2016 ayaa ahayd markii ugu dambaysay ee ay kooxda Real Madrid ku fashilantay in ay gool ka dhalin waydo kulan champions League ah xilli gool…
Shaxda Rasmiga Ah Ee Chelsea Vs Southampton: Giroud Oo Hogaaminaya Weerarka Blues
Waxa goordhaw la ciyaari doonaa kulan go,aamin doona kooxda Finalka FA Cup-ka la ciyaari doonta kooxda Man United iyada oo ay kala bixi doonaan kooxaha Chelsea iyo Southampton. Labada kooxood ayaa kulan premier League ah wada ciyaaray 2 todobaad ka…
Mesut Ozil ayaa seegay kulanka ay kooxda Arsenal la ciyaari doonto kooxda West Ham kana tirsan horyaalka premier League todobaadkiisa 35-aad. Xiddiga reer Germany ayaa xitaa laga dhex waayay kaydka kooxda iyada oo uu Wenger booskiisa ka ciyaarsiiyay xiddiga khadka…
Taageerayaasha adduunka kubada cagta ayaa jimichii si weyn ula yaabay kadib markii tababaraha kooxda Arsenal ee Arsene Wenger uu xaqiijiyay in uu ka tagi doono kooxda Arsenal dhamaadka xilli ciyaareedkan taas oo ah mid ayna marna taageerayaasha kubada cagtu ka…
Shaxda Rasmiga Ah Ee Arsenal vs West Ham: Arsene Wenger Oo Is Badal Ku Sameeyay Shaxdiisa
Kooxda Arsenal ayaa goordhaw la ciyaari doonta kooxda West Ham kulan ka tirsan horyaalka premier League todobaadkiisii 35-aad kulan ka dhici doona Emirates. Wenger ayaa is badal ku sameeyay shaxdiisa isaga oo kaydka dhigay weeraryahankiisa Aubameyang halka uu sidoo kale…
Xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Roma ee Edin Dzeko ayaa fariin u diray xiddigii hore ee ay isku kooxda ahaayeen haatan u ciyaara kooxda Liverpool ee Mohamed salah kadib markii ay isku aadeen wareega Semi-finalka tartanka champions League. Edin Dzeko…
Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa ku dhawaaqay inuu doonayo inuu fasax ka qaato kubada cagta muddo sannad ah sida ay sheegayaan wararku. Jurgen Klopp ayaa sheegay in uuna wax niyad ah u hayn in uu ka tago kooxda Liverpool haatan…
Lix Kooxood Oo Isku Baacsanaya Saxiixa Xiddiga Baxsadka Ka Ah Man United Ee Marouane Fellaini
Xiddiga baxsadka ka ah kooxda Man United ee Marouane Fellaini ayay isku baacsanayaan 6 xiddig oo doonaya adeegiisa sida ay sheegayaan wararku. 30 jirkan ayaa Si xor ah uga tagi doona kooxda Man United inkasta oo uu jose Mourinho dadaal…
Barcelona ayaa guul weyn oo 5/0 ah ku qaaday koobka Copa Del Rey-ga iyaga oo garaacay kooxda Sevilla sabtidii kuna guulaystay koobkoodii ugu horeeyay ee xilli ciyaareedkan. Kooxda reer Catalonia ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ku soo bandhigtay garoonka Wanda…
Daawo: Qaabkii Ay Xiddigaha Barcelona Ugu Dabaal Dageen Koobkoodii Ugu Horeeyay Ee Xilli Ciyaareedkan
Kooxda Barcelona ayaa niyad jabkii ka haritaanka champions League isaga baab,isay ku guulaysiga koobka Copa Del Rey-ga markii 4-aad oo xiriir ah. Barcelona ayaa guul aanay ku dhibaatoon ka gaartay kooxda Sevilla iyaga oo 5/0 uga qaaday kulan ay si…
Kadib markii uu Arsene Wenger xaqiijiyay in uu ka tagi doono kooxda Arsenal kadib 22 sano oo uu kooxda hogaaminayay xiddigii hore ee Kooxda ahaana kabtankii hore ee kooxda ee Patrick Viera ayaa ka mid ah tababarayaasha ugu cad-cad in…
Xiddiga garabka uga ciyaara kooxda chelsea ee Eden Hazard ayaa qirtay sababta ka dambaysa dhibaatada qaab ciyaareedka kooxdiisa iyo waliba qofka sababta u ah qaab ciyaareedka liita ee kooxdiisa. Xiddiga reer Belguim ee Eden Hazard ayaa qirtay in uu isagu…
Halyeeyga Kooxda Liverpool ee Luis Garcia ayaa Mohamed salah u sheegay halka wado ee uu xiddigaah Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi ugula tartami karo abaalmarinta xiddiga ugu fiican adduunka ee Ballon d’Or sanadka. Luis Garcia ayaa rumaysan in Mohamed salah…
Paris Saint-Germain Oo Dalab Ka Gudbinaysa Tababaraha Ka Tagi Doona Arsenal Ee Arsene Wenger Laakiin Uma Soo Bandhigayaan Boos Tababaranimo, Shaqo Noocee Ah Ayay La Rabaan
Tababaraha Kooxda Arsenal ee ka tagi doona Kooxda Arsenal ayaa haatanba dalab ka helay kooxda reer France ee Paris Saint-Germain Laakiin ma ahan boos tababaranimo sida ay sheegayaan wararku. Kooxda ku guulaysatay horyaalka Ligue 1 ayaa lagu soo waramayaa in…
Xiddiga Khadka Dhexe Ee Andres Iniest Oo Si Cad U Sheegay Wakhtiga Uu Mustaqbalkiisa Go,aan Ka Gaari Doono
Andres Iniest ayaan wali sheegin waxa uu qaban doono dhamaadka xilli ciyaareedkan laakii waxa uu shaaciyay waxa uu qalbigiisu ogyahay waxa uu qaban doona. Waxa uu gool dhaliyay kulankii ay kooxdiisa Barcelona sida xaragada leh u qaaday Koobka Copa Del…
Hordhac: Man City Vs Swansea City: Citizen Oo Haatanba Bilaaban Doonta Difaacashada Horyaalka Premier League
Kooxda Man city ayaa ciyaari doonta kulankoodii ugu horeeyay ee horyaalka iyaga oo ku guulaystay horyaalka premier League todobaadkii hore. Sky Blues oo isha ku haysa in ay jabiso ama bar-barayso rikooro cusub ayaa kulanka u soo galaysa in ay…
Hordhac: Chelsea Vs Southampton: Saints Mise Blues? Kooxda Finalka Kula Midoobi Doonta Man United
Xiddigaha Willian iyo Eden Hazard ayaa la filayaa in lagu soo celiyo shaxda kadib markii ay kaydka ku bilowdeen kulankii premier League ee Burnley. Marcos Alonso ayaa isagu ka soo maqnaan doona kooxda chelsea kadib markii dusha laga saaray ganaax…